Linus Torvalds anoshuvira Intel's AVX-512 kufa kunorwadza | Linux Vakapindwa muropa
Linus Torvalds anoshuvira Intel's AVX-512 kufa kunorwadza
Isaac | | Misangano / Zviitiko / Hurukuro, Kernel, Noticias
Linus Torvalds Haasveve mazwi uye anowanzo kutaura zvinonzwika uye zvakajeka pamusoro pezvaanofunga nezvezvimwe zvinhu. Ino nguva anga afunga kutaura zvaanofunga nezve Intel AVX-512 yekurayira yakatarwa. Iwo kuraira kwakaisirwa uko kunowedzerwa pamusoro pehwaro x86-64 ISA kupa zvakanyatsogadzirirwa manhamba ekuverenga kwenzvimbo dzeHPC.
Mukutaura iyi mirairo inofanirwa kuve yakanaka, muchokwadi inowedzera mashandiro emamwe marudzi ekuverenga ekushandisa anoshandiswa munzvimbo dzeHPC Asi Linus Torvalds haana kufarira kuti iyi seti yemirairo inosanganisirwawo muIntel desktop processor. Muchokwadi, zvinoita sekunge Intel yafunga zvakare uye zvinoita kunge remangwana ravo Alder Lake haizove neAVX-512 rutsigiro.
Linus Torvalds ndeye fungidziro yekuti ivo vanofanirwa kutarisa zvakanyanya pane izvo zvinonyanya kukosha kune ichi chikamu chechikamu pane kutambisa zviwanikwa pane mirairo mitsva seti seAVX-512 izvo zvisina zvazvinoreva. kunze kwemusika HPC (High Performance Komputa).
Sezvo AVX-512 yakatanga mu Xeon Phi x200 (Knights Landing), ipapo yaizoenderera kuenda kuSkylake-SP, Skylake-X, Cannon Lake, uye Cascade Lake. Mushure meizvozvo, vamwe vakaita seCooper Lake uye Ice Lake zvakare vakatsigira mamwe maseteki emirairo kubva kuAVX-512 repertoire.
La pfungwa yakatumirwa naPhoronix weLinus Torvalds haina marara:
Ndinovimba kuti AVX512 inofa rufu runorwadza, uye kuti Intel inotanga kugadzirisa matambudziko chaiwo pachinzvimbo chekuyedza kugadzira rairo dzemashiripiti uye vozogadzira mabhenji avanogona kutaridzika zvakanaka paari.
Ndinovimba Intel inodzokera kuzvinhu zvekutanga - tora maitiro ako ashande zvakare uye tarisa zvakanyanya pane yakajairika kodhi isiri HPC kana imwe nonsensical yakakosha kesi.
Ini ndambotaura izvi, uye ndichareva zvakare: munguva yemazuva eX86, Intel paaiuraya makwikwi ese, zvachose munhu wese akaita zvirinani pane Intel paFP (Float-Point) mitoro. Intel's FP performance yakayamwa (kutaura zvishoma), uye zvaive zvisina basa iota imwe.
Nekuti hapana munhu aive nehanya kunze kwemabhenji.
Izvo zvakafanana zvakanyanya kuitika neAVX512 ikozvino, uye mune ramangwana. Ehe, iwe unogona kuwana zvinhu zvakakosha kwauri. Kwete, izvo zvinhu hazvitenge michina mumufananidzo muhombe.
Uye AVX512 ine chaiyo kuderera. Ini ndoda kuona iyo transistor bhajeti ichishandiswa pane zvimwe zvinhu zvakanyanyisa kukosha. Kunyangwe ichiri iyo FP math (pane iyo GPU, panzvimbo yeAVX512). Kana ingo ndipe mamwe macores (ane yakanaka imwechete-yakashongedzwa mashandiro, asi pasina marara akaita seAVX512) sezvakaita AMD. (Rangarira kuti ikozvino Linus inoshandisa AMD Threadripper paPC yake)
Ndiri kuda kuti miganho yangu yemagetsi isvike neyakajairwa kodhi kodhi, kwete neAVX512 simba hutachiona iyo inobvisa huwandu hwakawanda. Sezvo iyo isingabatsiri junk inotora nzvimbo uye inobvisa macores.
Kana ndikaona. Ini ndinonyatso kudzidza mabhenji eFP uye ndinoona kuti vamwe vanhu vane hanya zvakanyanya. Ini ndinongofunga AVX512 ndizvo chaizvo zvisiri izvo zvekuita. Iko kufarira kwangu. Iwo muenzaniso wekutanga wechimwe chinhu Intel yaita zvisirizvo, muchikamu nekuwedzera kupatsanurwa kwemusika.
[…] Gadzira FPU inokwana, uye vanhu vachafara. AVX2 yakanyanya kudarika zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Linus Torvalds anoshuvira Intel's AVX-512 kufa kunorwadza
Edward Avila akadaro
Hongu, ndinobvumiranawo naLinus. Intel yagara yakaratidza chimwe chinhu chakati siyanei. Zvichida nekuti inotsamira zvakanyanya mukushambadzira. Asi kana iwe uchinyatsofarira, iwe ungadai watove uchisanganisira nano tekinoroji, iine mamwe akawanda macores. Zvisinei, zvese izvi zvinongokonzera makambani matsva kubuda kuti aite izvo Intel zvaisingade kuita.
Pindura Eduardo Avila
MaIntel ane yavo yekudyara kuraira seti haanyatso kuve Intel-igent.
LibreOffice 7.0 Yekutsikisa Yega: kujekesa gakava rakagadzirwa